Saldhigga Mareykanka ee Jabuuti oo uu Coronavirus galay, xayiraadna la saaray – Xogmaal.com
Warbaahinta RFI oo laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa iyada oo soo xiganeysa Wargeys wax ka qora arrimaha Militeriga Mareykanka waxay daabacday in saldhigga militeriga Mareykanka ee Jabuuti xayiraad lagu soo rogayo, kaddib markii laga helay kiiskii labaad oo cudurka Coronavirus ah.
Qofka labaad ee cudurka laga helay ayaa laga qaaday dalka Jabuuti, arrintaasina waxay horseedday in xayiraad lagu soo rogo saldhigaas oo bixiya istiraatiijiyadda militeri ee guud ahaan Bariga Afrika, waxaana lagu sheegay sababta dhaqdhaqaaqyadiisa loo xannibayo sidii loo yareyn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19.
Warbixinta RFI ayaa intaas ku dartay in Taliska Militeriga Mareykanka uu Talaadadii todobaadkan u diyaar garoobayay in xubnaha ka tirsan askarta ee magaalada Jabuuti deggan lagu xareeyo meel ka mid ah saldhigga.
Tallaabadaas ayaa lagu qeexay mid ku meel gaar ah, sida uu sheegay afhayeen u hadlay taliska militeriga Mareykanka oo uu soo xigtay wargeyska lagu magacaabo Stars and Stripes ee ka faallooda arrimaha militeriga Mareykanka.
Dalka Jabuuti ayaa laga diiwaan geliyey 1,077 kiis oo Coronavirus ah, waxaana la xaqiijiyey in ilaa hadda laba qof oo kaliya ay ugu geeriyootay.
Marka laga soo tago saldhigga militeriga Mareykanka ee laga helay kiisaskaas la xariira COVID-19, Jabuuti waxay sidoo kale marti galisaa saldhigyo kale oo uu ugu weyn yahay kan militeriga Faransiiska, oo ah waddankii horay u gumeystay Jabuuti.
Saldhigga Faransiiska waxaa ku sugan 1,400 oo askari, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha dagaalka.Waxaa kale oo Jabuuti ku yaalla saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee Faransiiska.